XOH HOOSE: Al-Shabaab Oo Xarun Canshuurta Lagu Qaado Ka Furtay Muqdisho -News and information about Somalia
Home Warkii XOH HOOSE: Al-Shabaab Oo Xarun Canshuurta Lagu Qaado Ka Furtay Muqdisho
XOH HOOSE: Al-Shabaab Oo Xarun Canshuurta Lagu Qaado Ka Furtay Muqdisho
Xog cusub oo so baxaya ayaa sheegaya in Laamaha amaanka ayaa ku daba jira xarun la sheegay iney ku uruuriyaan canshuurta ay ka qaadaan ganacsatada kala duwan ee magaalada Muqdisho.
Qaar ka mid ah Ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa si hoose Hay’adaha amniga ugu dusiyay xarun Al-Shabaab u diyaariyeen iney mideyso ganacsatada Caasimadda si canshuurta u bixiyaan,islamarkaana haddii ay dood qabaan tagi karaan.
Ciidanka nabad sugida oo isugu jira dhar cad iyo kuwo hubeysan ayaa la howlgeliyay si ay u baaraan arrintaan,waxaana labadii maalin ee la soo dhaafay howlgal arrintaan lagu xaqiijinayo uu ka socday Suuqa ugu weyn ganacsiga Soomaaliya ee Bakaaraha,kaas oo la aamisan yahay iney dhaqaalaha ugu badan Al-Shabaab ka helaan.
Mid ka mid ah Ganacsatada magaalada Muqdisho oo magaciisa qariyay ayaa inoo sheegay in markii hore Al-Shabaab ay ganacsatada ay Taleefano ka soo wici jireen,iyagoo ka doonaya lacago ay ugu yeeraan Zakawaad,taas oo sanadkiiba mar la qaado,balse hadda wuxuu sheegay in bishii lacag fara badan sida ay ganacsigooda uu yahay looga qaado.
Dhinac kale, wuxuu sheegay iney u sii dheer tahay canshuurta Dowladda oo marba marka ka sii dambeeyo lagu sii kordhinayo,taas oo adkeysay socoshadii ganacsiga iyo dhaqaalihii ka soo xaroon jiray.
Al-Shabaab ayaa markii hore ganacsatada ugu yeeray xarun ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose,halkaasi oo wixii looga baahan yahay looga qaadi jiray,balse hadda wey casriyeyeen.
Previous articleMareykanka oo $5Milyan duldhigay Madaxa Muwaaddin Mareykan ah kuna jira Al-shabab
Next articleKulankii Aqalka sare oo baaqday
XOG: Xasan Daahir oo Xaalad Halis uu wajahayo darteed loogu gacan...